Khadra XORNIMO iyo XANNAANABA heshay! – Bashiir M. Xersi
Posted on 3 Mar 2015 3 Mar 2015 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Jaalleyaal, marar badan haba la igu dhaliilo, inaan meel xun kaliya wax ka fiirshee, muggan aan idin la wadaago, war iyo dhacdo suubban.
Socdaal gaaban baan ku jiray, oo laba saac qaadan lahaa. Waxaan sii saarra bas i geyn lahaa magaalo aan dan u aaday.
Buug aan watay aqrintiis, ayaan ka caajisay. Baddalkeed, waxaan galay idha indheynta adeegga xiriirka bulshada. Cabbaar ka dib, ayaa jaalle Jacfar Kukay​ wuxuu igu soo tagge gareeyey qoraal. Waan fiirshay. Haddaan sadarrada sare aqriyey, waan garan waayey ujeedka farriinta, mise, waxayba ku saabsan tahay qiso xanuunkeeda iyo xirnaanteeda leheed, balse, dib xariir ka noqon doonta.
Markan sadarka shanaad marayo ayaan gartay, in farriinta jaallaheygu ila wadaagay ay ku qotanto gabar ku qabbirneed Yaman. Isma lahayn in wax loo qabtay ka sokow, guusha sidan u weyn ayey heshay, haddana, waa calaf iyo ayaane, waxay ku idlaatay wanaag kii ugu fiicnaa.
Markii uu ka fallaadooday in haddii aan isu gurmanno, aan wax badan qabsan karno, Soomaali ahaan, oo uu sheegay in samafalayaal badan oo Soomaaliyeed ay gacan iyo ka gaysteen caawinaad muuqata, ayuu u dhaadhacay dulucda farriinta, oo ku sheegay in Khadra, dedaal dheer ka dib, loo qaaday dalka Maraykanka. Mise, markii aan halkaa marsiinayey aqriska, ayaan qoraalkii sii wadi waayey farxad awgeed!
Runtii, ilmo ayaa indhahayga ku soo istaagtay, intii cabbaar ahna jirkaygu wuu dibaaxinayey, jiririco farxadeed awgeed. Waxyaabo badan ayaa igu soo dhacay inta aan qoraalkaa aqrinayey, haddana, marna ma filayn inay guushaa weyn marna dedegga ah heshay Khadra. Sidoo kale, runtii, intii qaddar ah, dhuunta ayaa i qallashay, anoon waxba dhihin hadinna, oonna i hayan. Farxad iiga weyn ma lahan warkan oo kale.
Waxaa farxdda kale ee sama falayaasha Soomaali ii wehlisay, in ay hesho daryeel, ubadkeduna aayo wacan yeeshaan. Laba kala dhacda ma ahan, mana noqon karaan. Sida ay Khadra daryeel ugu baahneed, ayaa ubadkeeduna aayo ugu baahnaayeen, haddase, labadaba la hel.
Laga yaabee, inta maanka laga xaday ama sheeko baralleyda lagu shubay, in ay is dhahaan; Dhul Gaalo jeclaa kani! Haa, waa adi iyo daamiirkaa, maxaa yeelay, markii hore, meesha ay ku dhibaateysneed, ee waliba mariilka ka dhigtay, xaggay eheed ma garan? Waa dhul Islaan. Yaman. Haddana, waa kuwii ka hor istaagay, wax kale iska daaye, xitaa inay hesho dawo iyo daryeel!
Farxaddu iima ahan kaliya in Khadra heshay xannaano, ee waa meesha ay ka heshay iyo dhulka ay ku heli doonto, maxaa yeelay, xaaladdeeda caafimaad mel walba waxba loogama qaban karin, sidaa awgeed, inay Maraykan deganaasho ka hesho waa ta ugu weyn, ee arrinteedu ku idlaan kartay, waana ku idlaatay.
Taa kaliya ma ahan, ee ubadkeeda ayaa heli doona aayo wacan iyo waxbbarasho fiican, illeyn, halkaa dayaca daacuun ee ku haystay iyo nolosho qallafsan ka sokow, waxaa mugdi ku jiray aayahooda tacliin iyo barasho.
Hubaal, inta Khadra wax u qabatay, ee Soomaali iyo shisheeye leh, inaysan u qabteen, haddii aan Wariye Jacfar Kukay ka diyaarsheen warbixinta xanuunka badan, haddaba, mar kale ayaan leeyahay ku mahadsanid, uguna bogaadinayaa, la’aantaa Khadra ma hesheen fursaddaa. Sidoo kale, farsamada qoraalka iyo sawirka naqshadaysan waa habayntii Eng Mohamed Midnimo oo runtii, si qurxan u xardhay mahadi ka ha gaartee.
Haddii Wariyuhu, sidaa suubban, xilkiisa u gudan lahaa, hubaal, in wax badan noo hagaagi lahaayeen. Haddiise, uu shaqadiisii dhammeed ku koobay; kala qaybin, isku dir, kala dilid, colaad hurin iyo aano faagid, waxaa dhacaya waxa aan aragno maalin walba, ee isku sheega wariyeyaal, aanse anigu u aqaan: WARRAMAAYAAL!
HALGANKU ha socdo.
2 thoughts on “Khadra XORNIMO iyo XANNAANABA heshay!”
4 Mar 2015 at 11:17 am	 Reply
deeqo faarax says:
Waxba lagu dhihi maayo dhul gaalo jeclaa waayo hala caawiyo cidna yeeli meyso balse kasoo qaadka alaaaaaaah ayaa iska leh ilaaheey ha caawiyo hana ku amaansado meesha ay daryeelka ka heshay
Pingback: Khadra XORNIMO iyo XANNAANABA heshay! | DALKAAGA-DHIS
Maanso: 8 Maarso, maalinta Haweenka